Waa sidee baaritaanka diyaarad dhacday? - BBC News Somali
Waa sidee baaritaanka diyaarad dhacday?
Mudnaanta kowaad waxay weeye, dabcan, boliiska maxaliga ah ama milatarigu in ay meesha diyaaradu ku dhacday ay ilaaliyaan inta ay baarayaashu gaarayaan halka diyaaradu ay ku dhacday.
Mararka qaar meesha diyaaradu ku dhacdo sidii lagu gaari lahaa ayaa waxay noqoneysaa maxnad. Waxaana lala kulmayaa caqabad weyn sida diyaaradda GermanWings ee dulimaadkeedu uu ahaa 9525 ee bishkii March ku dhacday meel aad u fog oo aan wado wanaagsan laheyd oo ka mid aheyd gobolka buuraleyda dalka Fransiiska oo markaasi uu baraf ceegaagay.
Burburkii diyaaradda ayaa waxaa uu ku baahay dhul buuraley ah oo masaaxadiisu ay gaareysa ilaa iyo 1550 mitir.
Sidoo kale, waxaa la keenyaa oo la codsadaa dukumintiyada la xiriira dayactirka diyaaradda iyo liiska rakaabka oo ay hayaan shirkadda diyaaradduhu.
Waxaa sidoo kale la raadiyaa hadalkii ugu danbeeyay oo ay isweydaarsadeen duuliyaha diyaaradda iyo qeybta hagista hawada sare oo allaaba ah cod duuban. Waxaa sidii kale la codsadaa macluumadda la xiriira sida ay hawadu aheyd marka ay diyaaradu dhaceysay.
Sida ku xusan xeerarka caalamiga ah ee hagista hawada, waxaa ugu muhiimsan waxaa weeye in baaritaan lagu sameynayo xaaladda goobtu diyaaradu ay ku dhacday.
Waxaa sidii kale door ku leh baaritaanka dalal diyaaradu ay ka diwaangashan tahay ama halka diyaaradu xarunteedu ay tahay. Waxaa kale oo muhiimad leh halka diyaaradda lagu sameeyayna.
Nidaamka baaritaanka ayaa waxaa uu noqonayaa mid aad u adag haddii ay diyaaradu biyo ku dhex dhacdo sidii ku dhacday diyaaradii laga lahaa dalka Faransiiska ee Air France ee duulimaadkeedu uu ahaan 447 oo ku dhacday badda Atlantiga iyadoo u kala goosheysa magaalooyinka Rio De Janeiro iyo Paris bishii June ee sanadkii 2009kii.
Waxay qaadatay ugu yaraan laba sanadood in badda gunteeda laga soo saaro santuuqii madoobaa ee diyaaradda macluumaadkeeda urursanaa.
Sanad kalena waxaa qaatay qorida warbixintii ugu danbeysay oo ay diyaarisay Hay'adda Hagista Hawada